Vatofantsika clamp PA-3000 dia tena fanitsiana, natao fihenjanana ADSS Optical fibre tariby eo amin'ny fifandraisan-davitra ambony andalana.
Ny fihenjanana ADSS clamp-tena dia ahitana fanitsiana wedges plastika, izay clamp ny Optical tariby tsy misy manimba. Wide karazana fahaiza-manaony izay namafisiny voatahiry ny samy hafa karazana wedges ADSS clamp mpanolotra.
Ny Stainless vy onitra mamela fametrahana ny clamps tamin'ny hazo lava fononteny mahitsizoro na fihantonany amin'ny faritra amoron-dranomasina.
ADSS fihenjanana 3000 clamp PA-misy na misaraka, na ho toy fiangonana ADSS FO tariby Stainless vy fononteny mahitsy sy ny tarika.
Fitaovana: Stainless vy onitra, fiberglass nanamafy, UV mahatohitra plastic.Analogs: ACADSS8, ACADSS10, ACADSS12, ACADSS14, ACADSS16, ACADSS18, PA 69 200
Previous: ADSS Cable Vatofantsika Clamp PA-500
Manaraka: Figure-8 Fibre Cable Vatofantsika Clamp, PA-05
ADSS Cable olana Clamp
ADSS fihenjanana clamp
Optical fibre tariby
pole fononteny mahitsizoro
Fampiatoana Clamp E8
Fibre Optic Cable Bracket, UPB
ADSS Cable Vatofantsika Clamp PA-500
ADSS Suspension Clamp, Sal-619